Wasiirka arimaha dibada Baxreyn oo lagu soo dhaweeyay - Axadle | Wararka Africa
Wasiirka arimaha dibada Baxreyn oo lagu soo dhaweeyay
Wefdi ka socda dowladda Baxreyn oo uu hoggaaminayo wasiirkeeda arrimaha dibedda ayaa ka degay Tel Aviv booqashadoodii ugu horreysay ee rasmi ah oo ay ku tagto boqortooyada Khaliijka, taasoo caadi ka dhigtay xiriirka ay la leedahay Israel bishii Sebtember.
Abdullatif Al Zayani waxaa ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha ee Tel Aviv Ben Benion Airport dhigiisa Israel Gabi Ashkenazi, waxaa si toos ah u tabiyay telefishanka Israel Arbacadii.
Booqashada ayaa timid iyadoo labada dal ay doonayaan in ay balaariyaan iskaashiga uu Mareykanku gadaal ka riixiyay ee lagu sheegay in looga soo horjeedka Iiraan.
Ergeyga Hogaamiyaha Mareykanka Donald Trump ee Bariga Dhexe, Avi Berkowitz, ayaa sidoo kale ku jiray duulimaadkii dul maray Sacuudiga, oo illaa iyo hadda diidan codsiyada Mareykanka ee ah in xiriir caadi ah lala yeesho Israel.
Baxreyn iyo deriskeeda Khaliijka, Isutagga Imaaraatka Carabta (UAE), ayaa Aqalka Cad ku saxiixday heshiisyada caadiga ah ee Mareykanku maalgeliyo ee lala galay Israel bishii Sebtember 15 – heshiisyadaas oo lagu cambaareeyay “khiyaano” Falastiin iyo xulafadooda.
Heshiisyadan ayaa burburiyey is afgarad muddo dheer soo socday oo Carabtu ku heshiiyeen oo ahaa in aan caadi laga dhigin Israa’iil illaa ay heshiis nabadeed oo dhammaystiran la gaarto Falastiin.
In kasta oo saraakiisha Aqalka Cad ay sheegeen in dalal badan ay ka fiirsanayaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ay la leeyihiin Israel, haddana horumarka soo kordhay wuxuu umuuqdaa mid aan dhici karin ka hor inta madaxweynaha xilka loo doortay ee Mareykanka Joe Biden uusan qaban xafiiska oo uusan dejin siyaasadda maamulkiisa ee Iiraan.
Al Zayani ayaa lagu waday inuu magaalada Qudus kula kulmo Raiisel Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo Xoghayaha Arimaha Dibada ee Maraykanka Mike Pompeo oo waqtigiisa sii dhamaanayo.
Sarkaalka ka tirsan wasaaradda arrimaha dibedda ee Israel Alon Ushpiz ayaa u sheegay Raadiyaha Ciidanka Israel in saraakiishani ay sii wadi doonaan shaqada heshiisyada is-fahamka ee lagu saxiixay bishii Oktoobar Manama ee ka hadlaya safarka diyaaradaha, hoyga fiisaha iyo furitaanka safaaradaha.
Pompeo, inta lagu guda jiro booqashadiisa labada maalmood ah ee Israa’iil, waxaa sidoo kale la filayaa inuu sameeyo booqashadii ugu horreysay ee sarkaal sare oo Mareykan ah uu ku tago dejinta Daanta Galbeed ee la haysto.
Dhammaan degsiimooyinka dhulka Falastiin ee la haysto waxaa loo arkaa in ay yihiin sharci-darro sharciga caalamiga ah.
Is ballaarintooda joogtada ah ee dowladihii is xigxigay ee Netanyahu hogaamiyay waxa ay cadeysay mid kamid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan geedi socodka nabada ee Falastiiniyiinta.
axadle 2964 posts
Brazil Oo U Dabaaldegtay Xasuuqii Ay Spain U Geysatay Xulka